के दीपेन्द्र साच्चै सन्की थिए ? हेर्नुहोस आज सम्म नखोजिएको प्रश्नको उत्तर,कतै हराएको इतिहास - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > विविध > के दीपेन्द्र साच्चै सन्की थिए ? हेर्नुहोस आज सम्म नखोजिएको प्रश्नको उत्तर,कतै हराएको इतिहास
के दीपेन्द्र साच्चै सन्की थिए ? हेर्नुहोस आज सम्म नखोजिएको प्रश्नको उत्तर,कतै हराएको इतिहास
June 4, 2020 June 4, 2020 GRISHI162
१९ वर्ष अघिको त्यो बिभत्स हत्याकाण्डको पर्दा खुल्छ खुल्दैन थाह छैन तर जनजनले आफ्ना प्रिय राजा उदार छवि चरित्रका बीरेन्द्र र राजपरिवार झन बीरेन्द्र राजाको वंश नै बि,नाश भएको स्मृतिमा बादल लागेको छैन । विश्वले नै चकित भएर हेरेको उत्सुकता पुर्वक नियालेको आधुनिक युगको चर्चित ह,त्याका,ण्ड । जब त्यो कहालीलाग्दो दिन अर्थात जेठ १९ आउँछ तब तब जनता आकुलव्याकुल र शो,काकुल नै भएको स्थितिमा पुग्छ्न र प्रिय राजाको स्मृतिमा भावुक हुन्छन । जिज्ञासु बन्छ्न के अझै यो ह,त्या,कान्ड छानबिन सम्भव होला ?
यदि ह,त्याका,ण्डको पर्दाफास हुने हो भने कतिलाई अनाहकमा लागेको आरोपबाट मुक्त भएर लान्छना मुक्त जीवन जिउने रहर छ, कति कोही दोषी उम्केको छ भने कानुनको बरियोमा कसिन पुग्नुपर्ने छ । यदि तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र नै ह,त्यारा हुन भने तथ्यसंग जनताको साक्षत्कार हुनेछ र आम धारणा तथ्य र तर्कमा आधारित बन्नेछ अनुमान आरोप र स्वार्थ सिद्ध गर्न लगाइएका झु,ठो आ,रोपको पर्दाफास हुनेछ । राहतलाई आहत, आहतलाई राहत या जे हो त्यो सत्य आउनु भनेको त्यो घ,टना सुनेका पुस्ताले पनि नवीन जानकारी हासिल गर्न सक्थे । देश नै भ्रम बाट मुक्त हुन्थ्यो । भिडियो हेर्नुहोस
विद्युतीय गाडीमा कर बढाएपछि लाटो उतर भन्दै अर्थमन्त्रीलाई महाविर पुनले देखाई दिए नाफा -घाटा
बिडम्बना के छ भने सिंहदरबार सधैँ बोल्नेहरूको मात्रै हुँदै आयो । गर्नेहरूलाई कहिल्यै बोल्न आएन ।
बेलायतबाट गायिका दिप्ता थापाको “यो जिन्दगी” म्यूजिक भिडियो सार्वजनीक ।
November 22, 2020 November 29, 2020 Raju Thapa
गणतन्त्रका भाग्यमानी युवराज
October 1, 2020 October 1, 2020 News Desk